My Google Adsense PIN Code Received! | My Burmese Blog
My Google Adsense PIN Code Received!	On April 8, 2008	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Blogging, Personal	ကျွန်တော့်ရဲ့ Google Adsense အကောင့် PIN Code ပို့စ်ကတ်လေး တနေ့က ရပါပြီ အခုတစ်ခေါက်ရအောင် Google မှာ ၂ ခါ request လုပ်လိုက်ရတယ်။ ပထမ တစ်ခေါက်တုန်းက ရောက်မလာဘူး။ တနေ့ကမှ sg က ၀မ်းကွဲအကိုဆီ စာရောက်လာတာ။ အမှန်တော့ GoogleAds ကထည့်ထားတာ ၇ လနီးပါးလောက်ရှိပြီ။ ပိုက်ပိုက်တွေ အများကြီးရနေတယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ဦး အခုမှ 25 ပဲရပါသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားက ဘလော့ခ်ဂါတွေနဲ့ ၀င်ငွေက မိုးနဲ့မြေလိုပဲ။ ကျွန်တော့် ၇ လစာက သူတို့ တစ်နေ့စာတောင် မမှီဘူး ဟီး ဟီး။ Google က Ads ပိုက်ဆံကို 100 ပြည့်မှ ငွေလွဲပေးတာပါ။ ၇ လကို 25 ဆိုတော့ ထားပါတော့ ၁ နှစ်ကို ၅၀ ၊ ကျွန်တော် ၂ နှစ်လောက်နေမှ ပိုက်ဆံထုတ်လို့ ရမှာပါ။ ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ ဘလောခ့်ရေးတာ မဟုတ်ပေမယ့် Ads အတွေ့အကြုံလေးရအောင် ထည့်ထားတာပါ။ ဘယ်သူမှလည်း ကလစ်လုပ်တာ မတွေ့မိဘူး =) ဟီး ဟီး။ တကယ်တော့ GoogleAds ကသာ နေ့တိုင်း 0.001 တောင်ရချင်မှရတာ ကျွန်တော် cafe ကနေ ဘလောခ့်ရေးတာ တနေ့ကို 1$ ကျော်ကျော်လောက်တော့ ကုန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အခု 25 လောက်ရတာကလည်း သူငယ်ချင်းတို့ လာဖတ်ရင်း နှိပ်ပေးကြတဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ပါပဲ။ ပိုက်ပိုက် ထုတ်လို့ရရင် ကော်ဖီလိုက်တိုက်ပါဦးမယ် =) ။ တကယ်တိုက်မှာနော်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း GoogleAds နဲ့ ပိုက်ပိုက်ရှာချင်ရင် အောက်က လင့်ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး sign up လုပ်နော် အဲဒီလိုလုပ်ရင် ကျွန်တော် ညွန်းပေးခ ပိုက်ပိုက်နဲနဲ ရတယ်။ =)
3 Comments	Myo Kyaw Htun
I got PIN in last month. (I posted about it in my blog). Now I’m waiting for Google Cheque. I took almost two years to make money from Google Adsense, evenahundred Hope you good luck too!
Like or Dislike:00	Google retiring AdSense Referrals « My Burmese Blog
[...] try GoogleAds for earning money from your blog or web site even Myanmar Site. You may already know how much I earn from my burmese blog. Google don’t support Myanmar (Burma) for GoogleAds account. If you want to earn from your [...]
Like or Dislike:00	How much I’ve earned from This Blog? « My Burmese Blog
[...] ပါပဲ အရင်ကတောင် ပြောဖူးသေးတယ်လေ $20 ကျော်ရတုန်းက [...]
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=4+6Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts